Ngathi | I-Wenzhou Hawai Electron kunye noMbane woKwakha uMbane Co., Ltd.
I-Wenzhou Hawai Electron & Electric Manufacture Co., Ltd. ekwabizwa ngokuba yi-YUANKY yaqalwa ngo-1989 YUANKY inabasebenzi abangaphezulu kwe-1000, egubungela indawo engaphezulu kwe-65000 yeemitha zesikwere. Sinemigca yokuvelisa yanamhlanje kunye nezixhobo eziphezulu zokulawula kunye nolawulo lwenzululwazi, iinjineli zobungcali, amagcisa aphezulu aqeqeshiweyo kunye nabasebenzi abanezakhono. I-YUANKY idibanisa i-R & D, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo yokwenza isisombululo esigqibeleleyo se-elektroniki kunye nombane.
I-YUANKY iqinisekisiwe yi-ISO9001: 2008 kunye neNkqubo ye-ISO14000 yeNkqubo yokuLawulwa koMgangatho. Sinikezela zonke iintlobo zezatifikethi zokuvavanya, ezinje ngesatifikethi seMveliso, ingxelo yokuhlola imveliso, ingxelo yovavanyo olunamandla ombane, ingxelo yovavanyo yomntu wesithathu, isiqinisekiso sokubhida njl.
YUANKY ikakhulu ukuvelisa wesekethe breaker, fuse, lwekontraka kunye edluliselwe, isokethi & iswitshi, ibhokisi ukuhanjiswa, surge arresters njl iimveliso zethu ukuhlangabezana nemigangatho yesizwe kunye nemigangatho kushishino. Sinezatifikethi zeemveliso zethu ezishushu zokuthengisa, ezinje nge-CB, i-SAA, i-CE, iSEMKO, izatifikethi ze-UL njlnjl.Isethi yabavavanyi kwaye zonke iimveliso zethu ziya kuvavanywa ngaphambi kokuba sishiye umzi-mveliso wethu. I-YUANKY ithengise iimveliso kumazwe angaphezu kwe-100 kwihlabathi liphela kwaye ngokuthe ngcembe ifumana udumo kumgangatho nasekuthembekeni.
Inkulungwane yama-21 lixesha eligcwele imiceli mngeni kunye namathuba, thina bantu baseYUANKY sizakuqhubeka siziphucula kwaye sizigqwesa ngokujongana nokhuphiswano oluqatha ngokuzithemba kwethu nokusebenza nzima. Abantu base-YUANKY bagcina ifilosofi "yokunyaniseka njengemali eyinkunzi, umgangatho wokuphila, izinto ezintsha zophuhliso". Sigxininisa kumgangatho wokuqala wemveliso kunye neklasi yokuqala emva kwenkonzo yokuthengisa ukuphuhlisa kunye nomzi mveliso wesizwe. Uqoqosho lwentengiso kukusinda kwezona zinamandla, kunjengokubheqa isikhephe ngasemlanjeni, hayi ukuqhubela phambili kukubuyela umva. Abantu baseYUANKY banethemba lokunyaniseka lokusebenzisana nabathengi basekhaya nabangaphandle ngomgangatho onokuthenjwa, ixabiso lokukhuphisana kunye nenkonzo ephezulu
Masijonge phambili kwikamva! Masisebenze kunye kwaye sakhe ubudlelwane bokuwina kunye nokuphumelela! Sinqwenela ngamandla ukudala ikamva eliqaqambileyo nawe!